आज २०७७ असोज ५ गते सोमबारको राशिफल – Dainik Sangalo
September 21, 2020 832
आज २०७७ असोज ५ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
Prevप्रहरीबाट कुटिएका युवकको प्रश्न : ओलीको पक्षमा प्रदर्शन गर्न पाइने, कुलमानको पक्षमा नपाइने ?
Nextबिनाकारण निर्दोष सर्वसाधारणमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई अब यस्तो सजाए हुने
अन्ततः फिर्ता हुने भयो संसद विघटन !
गुड्दै गरेकाे बसमा अचानक आगो लाग्यो
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन गृहले थाल्यो छलफल